खोइ बधाई - परिहास - नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतका नवनियुक्त विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरलाई बधाई दिएपछि कांग्रेसभित्र बबाल मच्चिएको छ । बबाली कांग्रेसीहरुको तर्क छ, देउवा एक पूर्वप्रधानमन्त्री भएको नाताले बधाई त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिनुपर्ने हो, कहाँ विदेशमन्त्रीलाई दिएको ? देउवाले आफू पहिले प्रधानमन्त्री थिएँ कि विदेशमन्त्री थिएँ भनेरै बिर्से कि क्या हो ?
देउवाले विदेशमन्त्री जयशंकरलाई बधाई दिनु कूटनीतिक गल्ती त थियो । तर कांग्रेस नेताहरुले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिएको भए त्यो झन् ठूलो गल्ती हुने थियो । किनभने उनले बधाई दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई होइन नि । उनले बधाई दिनुपर्ने त प्रमुख प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई हो । देउवा आफैँ एक प्रमुख प्रतिपक्षी नेता भएको नाताले उनले बधाई दिने पनि अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई मात्रै हो । चुनाव हारेको नेताले चुनाव हारेकै नेतालाई मात्र बधाई दिने हो । चुनाव हारेको नेताले चुनाव जितेको नेतालाई बधाई दिन मिल्छ ? आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्दैन ?
‘श्री राहुल गान्धीजी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता बन्नुभएकामा हार्दिक बधाई ! तपार्ईं प्रमुख प्रतिपक्षी नेता बन्नुभएको खबर सुनेर मलाई अति हर्ष लागेको छ ।’ उनको बधाई सन्देश त्यस्तो हुनुपर्ने थियो । तर खोइ, उनले आजसम्म भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई बधाई दिएको खबर त आएको छैन । एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको नाताले अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई बधाई दिनुपर्दैन ?
खुला दिसामुक्तिको दिशा
लामखुट्टे र सरकार